Забур 148 CARS - Nnwom 148 AKCB
Monkamfo Awurade mfi ɔsorosoro,
monkamfo no wɔ ɔsoro sorɔnsorɔmmea.
2Nʼabɔfo nyinaa, monkamfo no,
ne ɔsoro asafo nyinaa, monkamfo no.
3Owia ne ɔsram, monkamfo no,
nsoromma a ɛhyerɛn nyinaa, monkamfo no.
4Monkamfo no, ɔsoro mu soro
ne mo nsu a mowɔ ɔsoro atifi.
5Momma wɔn nyinaa nkamfo Awurade din,
efisɛ ɔno na ɔhyɛ ma wɔbɔɔ wɔn.
6Ɔde wɔn sisii hɔ afebɔɔ;
na ɔmaa ɔhyɛ nsɛm bi a ɛrentwa mu da.
7Monkamfo Awurade mfi asase so,
mo po kɛse mu abɔde ne po bun nyinaa,
8anyinam ne mparuwbo, sukyerɛmma ne omununkum,
ahum a moyɛ nʼapɛde,
9mo mmepɔw ne nkoko nyinaa,
nnua a ɛsow aba ne sida nyinaa,
10nwura mu mmoa ne anantwi,
abɔde nketewa ne nnomaa a wotu,
11asase ne amanaman nyinaa so ahemfo,
mo mmapɔmma ne asase sodifo nyinaa,
12mmerante ne mmabaa,
mmasiriwa ne mmofra nso.
13Ma wɔnkamfo Awurade din,
na ne din so sen din biara;
nʼanuonyam korɔn wɔ asase ne ɔsoro so.
14Wapagyaw mmɛn bi ama ne nkurɔfo,
nʼahotewfo nyinaa nkamfo;
Israelfo, nnipa a wɔda ne koma so no nkamfo.
AKCB : Nnwom 148